လူမီနီယံတံခါးဝပြတင်းပေါက် -- fscyal.com
ကျိုးပဲ့ခြင်းမရှိသောတံတားလူမီနီယံပြတင်းပေါက်များမှာအလယ်အလတ်အခန်းကန့်များမရှိပါ. မြေတပြင်လုံးကိုလူမီနီယမ်အလွိုင်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်, နှင့်သတ္တု၏အပူကူးမှုအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်. ထို့ကြောင့်, ၎င်း၏အပူစီးကူး, အပူလျှပ်ကာ, နှင့်လုံခြုံမှုကိုအပူချိုးလူမီနီယံတံခါးကိုကဲ့သို့ကောင်းသောမဟုတ်ပါဘူး&ပြတင်းပေါက်. ကျိုးပဲ့တံတားလူမီနီယံတံခါးများ & ပြတင်းပေါက်များသည်ချိုးဖဲ့ခြင်းမရှိသောတံတားများထက် ပို၍ စျေးကြီးလိမ့်မည်
ကျိုးပဲ့ခြင်းမရှိသောတံတားလူမီနီယံပြတင်းပေါက်များမှာအလယ်အလတ်အခန်းကန့်များမရှိပါ. မြေတပြင်လုံးကိုလူမီနီယမ်အလွိုင်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်, နှင့်သတ္တု၏အပူကူးမှုအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်. ထို့ကြောင့်, ၎င်း၏အပူစီးကူး, အပူလျှပ်ကာ, နှင့်လုံခြုံမှုကိုအပူချိုးလူမီနီယံတံခါးကိုကဲ့သို့ကောင်းသောမဟုတ်ပါဘူး&ပြတင်းပေါက်. ကျိုးပဲ့တံတားလူမီနီယံတံခါးများ & ပြတင်းပေါက်များသည်ချိုးဖဲ့ခြင်းမရှိသောတံတားများထက် ပို၍ စျေးကြီးလိမ့်မည်. လူမီနီယံတံခါးနှစ်ခုလုံး & ကျိုးပဲ့သောတံတားများ၏ပြတင်းပေါက်များနှင့်ကျိုးပဲ့မထားသောတံတားများကိုလူမီနီယမ်အလွိုင်းပရိုဖိုင်းများဖြင့်ပြုလုပ်သည်, နှင့်အသံ insulator တွင်လည်းအကျိုးသက်ရောက်မှုအလွန်ကောင်းလှ၏. စမ်းသပ်ပြီးနောက်, ကျိုးပဲ့သောအလူမီနီယံအကာအရံပြတင်းပေါက်များနှင့်ကျိုးပဲ့ပျက်စီးခြင်းမရှိသောတံတားလူမီနီယံအကာအရံပြတင်းပေါက်များ၏အသံကာကွယ်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရောက်ရှိနိုင်သည် 80 တူညီသောအရပျ၌. ဆိုလိုသည်မှာ, ၏ဆူညံသံလျှင် 90 အပြင်ဘက်တွင်ရှိသော decibel များသည်တံခါးများနှင့်ပြတင်းပေါက်များကိုပိတ်ထားရသည်, အတွင်းပိုင်းအသံကအကြောင်းပါ 35 decibels. ဖြည့်စွက်ကာ, အဖုံးပြတင်းပေါက်များ၏အသွင်အပြင်အတူတူပင်လုပ်နိုင်ပါတယ်, နှင့်နှစ်ခုပြည်တွင်းရေးဖွဲ့စည်းပုံအားဖြင့်ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်.
လူမီနီယမ်ကိုယ်ရေးဖိုင်: လူမီနီယမ်အလွိုင်း: 6063-T5, အပူ - ချိုး, Non- အပူ - ချိုး
အထူ: 1.4mm-2.0mm, စိတ်ကြိုက်
မျက်နှာပြင်ကုသမှု: စိတ်ကြိုက် (အမှုန့်ဖြင့်ဖုံးအုပ်ခြင်း၊).
အရောင်: အဖြူ / ရှမ်ပိန် / မီးခိုးရောင် / သစ်သားစပါး // အစိမ်းရောင် / ငွေရောင်
စတိုင်လ်: (1) Casement ပြတင်းပေါက် & တံခါးကို (2) လျှောပြတင်းပေါက် & တံခါးကို
(3) ခေါက်ပြတင်းပေါက် & တံခါးကို (4) အပြတင်းပေါက်
(5) Arched ပြတင်းပေါက် & တံခါးကို (6) စောင်း&လျှောပြတင်းပေါက် & တံခါးကို
(7) စောင်း&ပြတင်းပေါက်ဖွင့်ပါ & တံခါးကို (8) ပြင်သစ်တံခါး
ဖန်ခွက်: အမျိုးအစား: Low-E / Reflective / Tempered / Floated / Coated
လူပျို glaze: 4/5/6/8/10/12/15/19မီလီမီတာစသည်တို့ကို
နှစ်ဆ glaze: ရှင်းလင်းသော, အလွှာ, Low-E, pered
5+12+5မီလီမီတာ Clear Glass /6+ 12 + 6mm Tinted Glass /5+ 0.76PVC + 5mm Laminated Glass
6+12+6မီလီမီတာအနိမျ့ E ကို Glass ကို / 6mm + 1.14PVB + 6mm + 16A စသည်တို့
ဟာ့ဒ်ဝဲ: 1) တရုတ်ထိပ်တန်းအမှတ်တံဆိပ်
3) ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပွင့်လင်းခြင်းနှင့်ခိုင်မြဲစွာ riveted
မျက်နှာပြင်ကုသမှု: ပါဝါအပေါ်ယံပိုင်း, ကဗျာ, လမိုင်းကျော်, Electrophoresis
တံဆိပ်ခတ်: Ternary Ethylene Propylene ရော်ဘာတံဆိပ်ခတ်ထားသည့်ချောင်း
အခြားအစိတ်အပိုင်းများ: ခြင်ထောင် / သံမဏိမျက်နှာပြင် / အတွင်းပိုင်းမျက်မမြင် / Grid
လျှောက်လွှာ: လူနေအိမ်များ, ကွန်ဒို, ဟိုတယ်များ, ရုံးများ, ဗီလာ
ထုပ်ပိုး: 1. စံတင်ပို့ပုံး၏အထုပ်
2. သစ်သားသို့မဟုတ်သံ pallets
အာမခံချက်: 10 နှစ်ပေါင်း
လေဖိအားစွမ်းဆောင်ရည် .05.0 kpa GB / T7106-2008 /9အတန်းအစား
Air Permeability .50.5 m3 /(မီတာ. ဇ) GB ကို / T7107-2008 / 8 လူတန်းစား
မိုးရေ Permeability PA700 PA ဆိုပြီး GB / T7108-2008 /6အတန်းအစား
လေထုဆူညံသံစွမ်းဆောင်ရည် 45dB GB ကို / T8485-2008 /6လူတန်းစား
ကောင်းသောလျှပ်ကာစွမ်းဆောင်ရည် .01.0W /(m2. ငွေကျပ်) GB ကို / T8484-2008 / 10 လူတန်းစား
SC ၏ Shading စွမ်းဆောင်ရည် .20.2 GB / T2680-2008 /7အတန်းအစား
အားသာချက်များ အိုလူမီနီယံ Non- အပူချိုးတံခါးကို&ပြတင်းပေါက်
အဆိုပါလူမီနီယံ Non- အပူချိုးတံခါးကို&ပြူတင်းပေါက်သည်လူမီနီယံအပူချိုးတံခါးကဲ့သို့ကောင်းသောမဟုတ်ပါ&ပြတင်းပေါက်, သို့သော်၎င်းတို့သည်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအားသာချက်များစွာရှိနေသေးသည်:
ကြာရှည်ခံမှု: အလူမီနီယမ်အလွိုင်း၏မာကျောမှုမှာအဆင့်ဖြစ်သည် 10. အလူမီနီယမ်အလွိုင်းကိုမူလကတံခါးများနှင့်ပြတင်းပေါက်စီးရီးများအတွက်ရွေးချယ်ခဲ့သည်, အရာအစွမ်းသတ္တိကိုအပေါ်သိသာသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်, မာကျောမှု, အထူ, သိပ်သည်းဆနှင့်ရေစိုခံနှင့်အစိုဓာတ်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်!
ဆေးကြောရန်လွယ်ကူသည်: အလူမီနီယမ်အလွိုင်းတံခါးများနှင့်ပြတင်းပေါက်များ၏မျက်နှာပြင်များသည်ချောချောမွေ့မွေ့နှင့်အလွန်ကောင်းမွန်သည်, ရေမဖြိုးနဲ့, နှင့်အစိုဓာတ်နှင့်ရေခုခံအတွက်ထူးခြားသောအားသာချက်များကိုပိုင်ဆိုင်သည်. ရေစိုခံနိုင်ပြီးအစိုဓာတ်ထိန်းနိုင်ရုံသာမကသန့်ရှင်းအောင်လည်းပြုလုပ်နိုင်သည်, ၎င်းသည်သန့်ရှင်းတောက်ပသည့်လန်းဆန်းစေသောခံစားမှုကိုပေးသည်, ၎င်းသည်တံခါးများနှင့်ပြတင်းပေါက်များသက်တမ်းကိုရှည်စေနိုင်သည်.
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိသောသုည formaldehyde: လက်ရှိအလူမီနီယမ်အလွိုင်းတံခါးများနှင့်ပြတင်းပေါက်များ၏အကြီးမားဆုံးအားသာချက်မှာအစိမ်းရောင်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်မှုဖြစ်သည်. အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်လူမီနီယမ်အလွိုင်းကဲ့သို့သောသတ္တုပစ္စည်းများသည်အချို့သောတွင်းထွက်အရင်းအမြစ်များမှထုတ်ယူထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်.
ဖက်ရှင်, လှပနှင့်စွယ်စုံ: အလူမီနီယမ်အလွိုင်းတံခါးများနှင့်ပြတင်းပေါက်များသည်ယေဘုယျအားဖြင့်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွင်ခိုင်မာသည့်အလူမီနီယမ်အလွိုင်းပစ္စည်းများအသုံးပြုသည်. ဤအလူမီနီယမ်အလွိုင်းတံခါးများနှင့်ပြတင်းပေါက်များသည်လုပ်ငန်းစဉ်များစွာမှတစ်ဆင့်လုပ်ဆောင်ပြီးနောက်လုပ်ငန်းဆောင်တာများစွာနှင့်ပြည့်စုံနိုင်သည်. ဝယ်လိုအား.
ရေစိုခံနှင့်မီးသတ်: အလူမီနီယမ်အလွိုင်းတံခါးများနှင့်ပြတင်းပေါက်များသည်မီးနှင့်အစိုဓာတ်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်, ဒါကြောင့်အလူမီနီယမ်အလွိုင်းတံခါးများနှင့်ပြတင်းပေါက်များ၏ဒုတိယအဓိကအားသာချက်ကတော့သူတို့ဟာမီးစမ်းသပ်မှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်, ဆုံးရှုံးမှုကိုလျှော့ချ, နှင့်အစိုဓာတ်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်, သောတရုတ်တောင်ပိုင်းများအတွက်အလွန်သင့်လျော်သည်. အိမ်သုံးအတွက်.
အစိုဓာတ်နှင့်ပိုးမွှားခုခံ: အင်းဆက်ပိုးမွှားတိုက်စားခြင်းနှင့်အစိုဓာတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောတံခါးများနှင့်ပြတင်းပေါက်များပျက်စီးခြင်းကိုစိတ်ပူစရာမလိုပါ. ယူဆရသည်မှာ၎င်းသည်အိမ်သုံးသုံးစွဲသူများ၏အရေးတကြီးလိုအပ်ချက်ဖြစ်သည်. အလူမီနီယမ်အလွိုင်းတံခါးများနှင့်ပြတင်းပေါက်များ၏အစိုဓာတ်ခံနိုင်စွမ်း၏လက္ခဏာများကိုအီလက်ထရောနစ်ခေတ်တွင်အသုံးပြုရန်အလွန်သင့်တော်သည်.
ပibိဇီဝဆေးနှင့်အနံ့မရှိပါ: အသစ်ပြုပြင်ထားသောအသစ်သောအိမ်များသည်အန္တရာယ်ရှိသော - ညစ်ညမ်းသောအနံ့များရှိသည်, နှင့်အလှဆင်ခြင်းဖြင့်ယူဆောင်အနံ့ဓာတုပစ္စည်းအနံ့, အရာခဏဖယ်ရှားပစ်ရန်ခက်ခဲသည်. ဘယ်လောက်ပဲလေလန်းဆန်းစေသလဲ, သင်၏အနံ့သည်ကြာမြင့်စွာတည်ရှိနေပြီးသင့်ကိုယ်ပိုင်နေရာကိုအနှောင့်အယှက်ပေးသည်, လူမီနီယံအလွိုင်းတံခါးများနှင့်ပြတင်းပေါက်များ၏အဓိကပစ္စည်းမှာအလူမီနီယမ်အလွိုင်းဖြစ်သည်, အစဉ်အလာသစ်သားနှင့်အတုပျဉ်ပြားများ၏အနံ့အန္တရာယ်များကိုရှောင်.
တန်ဖိုးထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည်: စားသုံးသူများအိမ်သို့ ၀ ယ်သည်နှင့်အမျှရိုးရာတံခါးနှင့်ပြတင်းပေါက်ထုတ်ကုန်များသည်တန်ဖိုးလျော့လာသည်. နောက်ဆုံးတော့, သူတို့အစားထိုးခြင်းနှင့်စွန့်ပစ်ကြသည်. စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း, စွမ်းအင်ချွေတာခြင်းနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ကာကွယ်ရေးသည် ပို၍ အရေးကြီးလာသည်. ဒါဟာတန်ဖိုးကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည်, စားသုံးမှုနိမ့်; ၎င်းသည်စွမ်းအင်ချွေတာခြင်းနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ကာကွယ်ခြင်းတို့တွင်အထောက်အကူပြုသည်.
မြင့်သောအဆောက်အ ဦး , အိမ်, တိုက်ခန်း, ရုံးခန်းareaရိယာ, နှင့်မိုးလုံလေလုံareaရိယာ.
ကျော်လွန် 30000 site ပေါ်တွင်မှိုသတ်မှတ်
ထက်ပိုပြီး 400 အလုပ်ရှင်
ထုတ်လုပ်မှုနှစ်ခုဖုံးအုပ်ထားသည်, အရည်ပျော်မှု, သစ်ပင်ကြီး, electrophoresis နှင့်အမှုန့် coting
အလူမီနီယံပစ္စည်းများအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံမှပြုလုပ်သည်, အစအ ဦး မှအရည်အသွေးကိုထိန်းချုပ်.
အမှတ်အသားများ (Tags)：လူမီနီယံတံခါးများပြတင်းပေါက်, လူမီနီယမ် extrusion ပရိုဖိုင်း, လူမီနီယံမဟုတ်သောအပူချိုးတံခါးနှင့်ပြတင်းပေါက်, လူမီနီယံပရိုဖိုင်းကို
လူမီနီယမ်ရှပ်တံခါးကို&ပြတင်းပေါက်နှင့် roller ရှပ်တာ
လူမီနီယံ Casement တံခါးကို&ပြတင်းပေါက်